Isilimela 11, 2018 admin
2 Iinkampani ibhasi enkulu eBrazil kaloku Bitcoin
iinkampani ezimbini ibhasi Brazilian, Traffic Garcia and South Brazil, ukuba yinxalenye yeqela GSB baye baba nje iinkampani yokuqala ukuthutha abantu eBrazil ukwamkela cryptocurrency nje indlela yokubhatala.
Eli qela ekuqaleni wakhetha ukusebenzisa Bitcoin kuphela, kodwa uceba ukongeza Litecoin ngu Julayi.
"Imisebenzi ezininzi zoqoqosho kunye yorhwebo kufudukela kwihlabathi wedijithali, kunye ingxenye sithwala wendlela akukho eyahlukileyo "utsho vice GSB Group mongameli Estefano Boiko Junior.
Ezi nkampani zokuhamba zinika iihambo phakathi kwezixeko kunye nohambo zabucala kwizikolo, iiklabhu, iinkampani excursions.
Indlela Intlawulo entsha ifumaneka kwi-website iinkampani ibhasi, nge Ukubhukha intanethi kuphela, kwaye itikiti ziya kuthunyelwa kwi email umthengi njengoko isiqinisekiso senkokhelo.
500 000 abantu eSwitzerland uvotela Bitcoin efana inkqubo zemali
Iphulo ukushifta ngokupheleleyo wezezimali Switzerland kuzo into efana inkqubo yezoqoqosho Bitcoin elilahlekileyo spectacularly izolo - it ikwaze phantse 500,000 iivoti, emhlabeni 25% kwabo bantu.
Isicwangciso impikiswano - eyaziwa ngokuba enguMongami Money Initiative - ange wabona iibhanki zorhwebo bathintelwa ukusuka ngekhompyutha ukudala imali xa bayababoleka ngaphaya bekelelo zabo.
“Cryptocurrency kunye blockchain ubukeka ngathi apho siya kwesihloko. Kusenokwenzeka ukuba isetyenziswe phantsi kwenkqubo sase Siphakamisa,” wathi Emma uDawney, ibhodi ilungu MOMO, iqela ecetywayo iNkosi Money Initiative.
Currency Digital Goes zesiqhelo kunye DasCoin
Ingxelo Daily Market Kraken for 10.06.2018
$233M wasebenza kuzo zonke iimarike namhlanje
diam inkulu Wehlabathi ...
Japan ukubona 6 c entsha ...
Imiba New York cryp ...
Post Previous:Wonke wesithathu German ingqalelo cryptocurrencies-mali
Post Next:Blockchain News 12.06.2018
Trevor Moede uthi:
Isilimela 19, 2018 e 5:26 PM